पुटिनका कट्टर आलोचक एलेक्स नभाल्नीलाई ‘विष खुवाइयो’: बर्लिन लगेर उपचार गर्न जर्मनको एयर एम्बुलेन्स केही बेरमा पुग्दै « LiveMandu
५ भाद्र २०७७, शुक्रबार १२:०१
रुस, ५ भाद्र, २०७७ । रूसका विपक्षी नेता एलेक्सी नभाल्नीलाई बेहोशीको हालतमा अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ । उनक प्रवक्ताका अनुसार विष दिइएको हुनसक्छ ।
रूसका भ्रष्टाचार विरोधी नेता नभाल्नी विमान यात्राका क्रममा अचानक बिरामी भएका थिए । प्रवक्ता किरा यारमीशका अनुसार नभाल्नीको स्वास्थ्य अत्यन्तै नाजूक हुनथालेपछि विमानलाई ओम्स्कमा आपतकालीन अवतरण गराइएको थियो । उनले आशंका व्यक्त गर्दै भने, “चियामा केही न केही मिसाइएको हुनुपर्दछ ।”
अस्पतालका अनुसार नभाल्नीको स्वास्थ्य स्थिर भएपनि अवस्था भने गम्भीर नै छ । उनको उपचारमा सहयोग गर्न जर्मनीको पीस फाउन्डेशले एउटा आकस्मिक विमान ओमस्क पठाउँदै छ । नभाल्नीको स्वास्थ्यका लागि हर सम्भव सहयोग गर्ने जर्मनीले बताएको छ ।
BREAKING: German rescue plane to land in Omsk within the hour to evacuate Alexey Navalny to Berlin to be treated for severe poisoning. The next uncertainty is whether @Navalny is well enough to fly and whether Russia will let him go. https://t.co/4353njnYCC
४४ वर्षीय नभाल्नी राष्ट्रपति भ्लादिमीर पुटिनका कडा आलोचकको रुपमा परिचित छन् ।
गत जुनमा भएको संवैधानिक सुधार सम्बन्धमा भएको भोटिङलाई उनले द्रोहको संज्ञा दिएका थिए र उक्त कार्यलाई संविधानको उल्लंघन भनेका थिए । जनमत संग्रहमा जीत पश्चात पुटिन अझै दुई कार्यकालका लागि राष्ट्रपति पलमा रहिरहन सक्छन् ।
एन्टी करप्शन फाउण्डेशनका प्रेस सेक्रेटरी किरा यारमीश ने ट्वीट गर्दै लेखेका छन्, “आज विहान नभाल्नी मस्कोबाट टम्स्क फर्किदै थिए । उडानका क्रममा उनी बिरामी भएका छन् । विमानलाई ओम्स्कमा आपतकालीन अवतरण गरियो ।”
उनको आशंका छ की एलेक्सी नभाल्नीलाई चियामा विषय मिसाएर दिइएको थियो । किनकी विहान उनले केवल चिया पिएका थिए । यारमीशले डाक्टरबाट पाएको प्राप्त जानकारी अनुसार विषालू पदार्थ तात्तातो चियामा हालेर दिइएको छ । किनकी विहान उनले केवल चिया पिएका थिए । उपचारमा संलग्न डाक्टर भन्छन्, “विषालु पदार्थ तातो तरल पदार्थमा चाँडै घुल्यो ।”
किरा यारमीशले केही बेर पछि गरेको अर्को ट्वीटमा लेखेका छन्, “एलेक्सी नभाल्नी अहिले भेन्टिलेटरमा छन् र कोमामा पुगेका छन् ।” उनका अनुसार अस्पताल परिसरमा अहिले ब्यापक ठूलो संख्यामा प्रहरी तैनाथ गरिएको छ ।
उनका अनुसार: शुरुमा डाक्टरहरुले नभाल्नीको स्वास्थ्य सम्बन्धमा जानकारीहरु सार्वजनिक गरी सघाउने कुरामा तयार थिए तर अहिले भने परिक्षणमा अबेला भइरहेको बताइरहेका छन् । “डाक्टरहरुले जानीजानी समय लगाइरहेका छन् र कारण बताइरहेका छैनन” यारमीशको आरोप छ ।
Director of FBK Ivan Zhdanov: police now says that they have found poison, and that poison present grave danger not only to Navalny, but to people around him, so hazmat suits should be used https://t.co/NCTFI4XOGe pic.twitter.com/7Bavtyf67S via @Kira_Yarmysh #Russia
— Liveuamap (@Liveuamap) August 21, 2020
सामाजिक सञ्जालमा जारी भिडियोमा देखिए अनुसार विमानस्थलको रनवेमा उनलाई स्ट्रेचरमा राखेर एम्बुलेन्सतर्फ लगिंदैछ ।
To those who don’t know.#Navalny has dozens criminal cases open.Some were buried during investigation. He still has the opportunity to travel anywhere he wants, speak anything he wants . Why not send him to jail?Oh, because the bloody tyrant #Putin likes to poison his victims ??‍♀️ pic.twitter.com/Y3WQ46ejoN
— Springprincess (@TamrikoT) August 21, 2020
Putin has poisoned his opposition before and this news sounds tragically familiar. When will President Trump forcefully condemn?https://t.co/Hv20vMSWik
— Senator Dick Durbin (@SenatorDurbin) August 20, 2020
अर्को एक भिडियोमा उनलाई उडानक क्रममा पीडामा रहेको देख्न सकिन्छ ।
विमानमा उपस्थित यात्रुले देखे अनुसार, “उडान शुरू हुनु पहिले उनी शौचालयमा गए तर फर्किएनन । धेरैबेर पछि पनि शौचालयबाट नफर्किएपछि उनलाई शौचालयबाट निकालियो । उनी सिकिस्तै देखिन्थे र बाहिर निस्किंदा पीडाले चिच्याइरहेका थिए ।”
सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक अर्को एक भिडियोमा उनी टम्स्क विमानस्थलको क्याफेमा एक कपमा केही पिउँदै गरेको देख्न सकिन्छ । क्याफेका मालिक सीसीटीवी फुटेज चेक गर्नतर्फ जुटेका छन् जसले प्रमाण उपलब्ध गराउन सहयोग गर्नेछ ।
को हुन एलेक्सी नभाल्नी?
नभाल्नीलाई सरकारका तर्फबाट हुने गरेका भ्रष्टाचारलाई उजागर गर्ने गरेको कारण चर्चा मिलेको हो । उनले पुटिनको यूनाइटेड रुस पार्टीलाई “बदमाश तथा चोरहरुको पार्टी” भन्दै आएका छन् । कैंयन पटक उनलाई जेल चलान समेत गरिसकिएको छ ।
सन् २०११ मा उनलाई पक्राउ गरेर १५ दिनका लागि जेल चलान गरिएको थियो । उनले पुटिनको पार्टीमाथी संसदीय चुनावका क्रममा भोटिङमा धाँधलीको आरोप लगाउँदै विरोध प्रदर्शन पनि गरेका थिए । त्यस कार्यमा समेत उनी पक्राउ परेका थिए ।
जुलाई २०१३ मा समेत केही समयका लागि उनलाई जेल पठाइयो । जसलाई उनले राजनीतिक कारण बताएका थिए । सन् २०१८ मा उनले राष्ट्रपति निर्वाचनमा उम्मेद्दवारीको तयारी गरेका थिए तर धोखाधडीको आरोप लगाउँदै उनको उम्मेद्दवारीमाथी रोक लगाइएको थियो । नभाल्नीले यसलाई पनि राजनीतिक कदम बताएका थिए ।
जुलाई २०१९ मा अनाधिकृत रुपले विरोध प्रदर्शनको आह्वान गरेका कारण उनलाई ३० दिनको जेल सजायमा राखिएको थियो ।
कैंयन पटक हत्याको प्रयास
जुलाई २०१९ मैं जेल बसाई कै क्रममा उनको स्वास्थ्य बिग्रिएको थियो । त्यस बखत पनि उनलाई विषय दिइएको कोशिशको आशंका गरिएको थियो ।
सन् २०१७ मा उनीमाथी भएको हमलामा एन्टिसेप्टिक डाईको प्रयोग गरिएको थियो । जसका कारण उनको दाहिनो आँखा केमिकलको जलनका कारण प्रभावित हुनपुगेको थियो ।
गत वर्ष उनले थालेको एन्टी करप्शन फाउण्डेशनलाई सरकारले विदेशी एजेन्ट घोषणा गरेको थियो । जसका कारण फाउण्डेशनलाई कडा जाँच प्रक्रिया पार गर्नुपर्ने हुन्छ । अझै त्यो जाँच सक्किसकेको छैन ।